ဝက်သား ဆာတေးကင် | Wutyee Food House
« Cheese and onion Pancake
သင်္ကြန်အကြိုနေ့ အတွက် မုန့်လုံးရေပေါ် »
April 11, 2010 by chowutyee
၀က်သားဆာတေးကို အိမ်မှာ လုပ်စားချင်သူတွေ အတွက် ၀က်သားဆာတေးမွှေးမွှေးလေးပါ။ လုပ်စားကြည့်ကြပါအုန်းနော်….
၀က်သားကို နုပ်ထားရန် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ ၀က်သား – ၂၀ ကျပ်သား (၁ပေခွဲ အရှည်ပါးပါးလှီးပါ)
၂။ ဆနွင်းမှုန့် (Turmeric Powder) – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၃။ နတ်နတ်ပွင့် (Star anise) – ၂ခု
၄။ နံနံစေ့မှုန့် (Coriander Powder) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ပုံ၁ပုံ
၅။ ပဒယ်ဂေါ (Galangal Root)- ၁ခု (အစောင်းလှီးပါ)
၆။ သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၇။ ဆား ၊ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၈။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
ဆာတေးဆော့ တွင် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ ငရုတ်သီးခြောက်အနီ – ၄ထောင့် (ငရုတ်ဆုံထဲထည့်ပြီး ကြေညက်နေအောင် ထောင်းပေးပါ)
၂။ ငရုတ်သီးနီ – ၂ထောင့် (ငရုတ်ဆုံထဲထည့်ပြီး ကြေညက်နေအောင် ထောင်းပေးပါ)
၃။ မြေပဲ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း (မညက်တညက် ထောင်းပေးပါ)
၄။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၄မွှာ (ထောင်းပေးပါ)
၅။ Cream (သို့) ခရင်းမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း (ရေနွေး စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းထည့်ဖျော်ပေးပါ)
၆။ အုန်းနို့မှုန့် (Coconut Cream) – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၇။ ရေ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၈။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ဇွန်း
၉။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၁၀။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
၁။ ပါးပါးလှီးထားသော ၀က်သား များကို ဇောက်ခွက်တစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး နုပ်ထားရန် ပါဝင်သောပစ္စည်း (ဆနွင်းမှုန့်၊ နတ်နတ်ပွင့်၊ နံနံစေ့မှုန့်၊ ပဒယ်ဂေါ၊ သကြား၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်) အားလုံးကို ထည့်၍ သမအောင် ရောနယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် အနည်းဆုံး ၂နာရီခန့် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်၍ နုပ်ထားပေးပါ။
၃။ ၀က်သားကို နုပ်ထားစဉ် ဆော့ကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
၄။ ဆော့အရည်ပြုလုပ်နည်းတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ အားလုံး( ငရုတ်သီးခြောက်၊ ငရုတ်သီးနီ၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရင်း၊ အုန်းနို့မှုန့်၊ ရေ၊ သကြား၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် )ကို ခွက်တစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး ရောနယ်လိုက်ပါ။
၅။ နုပ်ထားပြီး ၂နာရီကြာလျှင် ၀က်သားကို တုတ်ဖြင့် ထိုးပြီး သီထားပေးပါ။
၆။ ပြီးလျှင် မီးအလယ်လတ်ဖြင့် ၀က်သား များကို ကင်ပေးပါ။
၇။ ၀က်သားကင်ပြီးလျှင် ဆာတေးဆော့ဖြင့် တွဲဖက်၍ ၀က်သားဆာတေးကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး….
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 11 Comments
on April 12, 2010 at 8:40 am | Reply Hmone Gyi
sar chin sa paw…sar chin like tar heee
on April 12, 2010 at 10:20 am | Reply chowutyee
YKKO က ၀က်ဆာတေးနဲ့ ငါဟာ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ. ဟီးဟီး… 🙂
on November 23, 2010 at 3:27 pm | Reply lue
hi wutyee . what is cream ?
on November 24, 2010 at 3:19 am | Reply chowutyee
Lue ရေ Cream ဆိုတာ Ready Made Creamစက္ကူဗူးတွေကို ပြောတာပါ။ Cream ဗူးက ဖောက်ပြီရင် ကြာရှည်မခံတာမို့ သိပ်လည်း အသုံးမခံပါဘူး။ ၀တ်ရည်ကတော့ creamဗူး သုံးမယ့်အစား ကော်ဖီမှုန့်မှာသုံးတဲ့ creamမှုန့်ကို ရေနွေးနဲ့ခပ်ပျစ်ပျစ် ဖော်ပြီ ထည့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်… ၀က်ဆာတေးက ဆိုင်ကထက် ပိုစားကောင်းတယ်.. 😛
on December 10, 2010 at 3:25 am | Reply ko nyein
let me know,is it milk cream?
on December 11, 2010 at 3:36 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် ကိုငြိမ်း .. Milk Cream ကိုပြောတာပါ… လုပ်စားကြည့်ပါနော်… ဒီဝက်စာတေးကင်က အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်… 🙂
on May 26, 2011 at 4:27 am | Reply magyi
on February 8, 2012 at 1:10 pm | Reply Si Thu
Wet Thar ko htoe tae Doat ko yae seain htar ya tar htae pyaw kae ohn ma paw, Nyi ma yae, no mo so, mee kin taeakhar doat tway kyan kone mar paw kwae 😀
on February 8, 2012 at 2:22 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ပါ အခုလို ဖြည့်စွက်ပေးလို့ ၀တ်ရည်က အထူးကျေးဇူးပါနော်။ တခါတလေ ဟင်းချက်နည်းမှာ လိုအပ်တာ၊ ကျန်ခဲ့တာတွေ ရှိရင် နားလည်ပေးပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ခုဝက်သား ဆာတေးကင် ချက်နည်းမှာ ပြန်ဖြည့်စွက်ထားလိုက်မယ်နော်.. Thanks 😛
on February 8, 2012 at 1:11 pm | Reply Si Thu
Milk Cream lea ya tae whipping cream so po Right mar paw
on February 8, 2012 at 2:25 pm | Reply chowutyee
milk cream ကပိုပြီ မြန်မာပြည်မှာ ရှာရလွယ်တယ်။ ပြီတော့ ဈေးသက်သာလို့ပါ။ ပြီတော့ cream တွေက သိပ်ကြာရှည်မခံဘူးရယ်။ ၀ယ်ပြီ ချက်ချင်းသုံးနေမှ၊ မဟုတ်ရင် expire ဖြစ်တာနဲ့၊ မကောင်းတော့တာနဲ့။ ကိုယ်ကလည်း ချက်နည်းတိုင်း cream မသုံးဖြစ်တော့၊ ရှာရလွယ်ပြီ ဈေးသက်သာတာကို ပဲသုံးဖြစ်တယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ.. 🙂